Feature Archives - Page 15 of 18 - Hintharmedia
Feature August 15, 2016
၂၁ ရာစုပင်လုံ ညီလာခံတွင် မွန်တိုင်းရင်းသားများအတွက် တင်ပြတောင်းဆိုမည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမည့် မွန်အမျိုးသားကွန်ဖရင့်ကို ကျင်းပရန်အချိန်ကား နီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရသစ်၏ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သော ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မွန်အမျိုးသားကွန်ဖရင့်ကိုမူ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၄...
Feature August 11, 2016
အာရှလမ်းမကြီးနံဘေးတွင် နေရာယူထားသောကြောင့် အကွက်အကွင်းကောင်းသည်ဟု ဆိုသော်လည်း လှိုင် အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားဝင်း၏ အနေအထားမှာ ခရီးသည်များအတွက်တော့ မလူးသာမလွန့်သာ။ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ခရီးသွားလာရောက်မှုများပြားသော မွန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် မော်လမြိုင်၏ လှိုင် အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင် ခရီးသည်ယာဉ်လိုင်းများပြားလာခြင်းနှင့်အတူ နေရာကလည်း ကျပ်တည်းလာသည်။ သို့သော် မညီမညာသော လမ်းများနှင့် ဝမ်းရေးအတွက် အပြိုင်အဆိုင် ခရီးသည်ရှာဖွေသော...
Feature August 8, 2016
မြိုင်သာယာ ၏ သန်းခေါင်ယံည များက ငြိမ်သက်လှ သည် ။ မော်လမြိုင် မြို့ ၏ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သော မြိုင်သာယာ ကား ဘီယာဆိုင် နှင့် ကာရာအိုကေ လုပ်ငန်း များကြောင့် နာမည်ဆိုးအချို့ ရှိသော်လည်း ၊ကိုယ့်ခြံကိုယ့် ဝင်း အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း...
Feature August 3, 2016
မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ လုပ်ငန်းတာဝန်ယူများ စတင်ထမ်းဆောင်လာသည်မှာ ၄လခန့်ရှိပြီဖြစ် သည်။ မွန်ပြည် နယ် အစိုးရ သည်ကား ယခင် အစိုးရ ဟောင်း ထားခဲ့သော ကောင်းမွေဆိုးမွေ များ ဆက်ခံ နေရသည်။ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ သစ်တွင် ကား...
မှောင်ခိုဈေးကွက် တစ်ခေတ်ထွန်း စဉ်က စီးပွားရေး ကောင်းခဲ့သော မွန်တို့ ၏ ရာမည မြေသည်ကား အစိုးရ အပြောင်း အလဲ အဆက်ဆက် ကြား စီးပွားရေး ဆူကြုံနိမ့် မြင့်တို့ ကို ခံခဲ့ရသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များသည် လည်း ငါးပွက်ရာ...
Feature July 27, 2016
မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ သည်ကား ပြည်ထောင်စု အစိုးရ မှု ဝါဒအတိုင်း ရက်တစ်ရာ စီမံကိန်း ချမှတ် လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်း သည် ကား ဧပြီလ ၁ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြို့ရေးအတွက် ရက်တစ်ရာ စီမံချက်ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ဇူလိုင်လ...
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ခုနစ်ဦးအပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိလုပ်ငန်းများတွင် ရောင်းစားခံထားရသူ ၂၁ ဦးကိုဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခံရသူများသည် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများတွင် အသီးသီးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရပြီးအသက်မပြည့်သေးသူခုနစ်ဦးပါဝင်နေသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပန်းရံလုပ်ကိုင်ရန် မော်လမြိုင်မြို့မှ ပွဲစားကတစ်ဆင့် သွားရောက်ခဲ့သော်လည်းငါးဖမ်းစက်လှေ များတွင် ရောင်းစားခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းချောင်းဆုံမြို့တိုးချဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်နေထိုင်သည့် အသက် ၂၃...
ကျွန်တော်ရှင်သန်ခဲ့သောဝန်းကျင်ဝင်းရော်ဒေသသည်အလွန်ကိုဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခဲ့သည်။(၂၀၁၀)ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှကရင်ပြည်နယ်/ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ဒေသသည်စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်အပြင်အမဲရောင်နယ်မြေအဖြစ် သမုတ်ခံခဲ့ရသည့်ကာလမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ဝင်းရော်မျက်ရည်လို့ပြောလိုက်လို့အရမ်းများကြီးကျယ်သွားမလားဘဲ။ဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားပြီးဝေခွဲကြည့်လိုက်လျှင်ကျွန်တော်တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်အရအခုအချိန်အခါနဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်တော်တော်မှန်ပြီးချိန်သားကိုက်နေ ပါသည်။တခြားမကြည့်ပါနှင့်။ ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုပဲပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအစိုးရကနယ်မြေအနေအထားအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဟုအကြောင်းပြကာကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိမွန်လူမျိုးများဆန္ဒမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသည်နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။အသိ အမှတ်ပြုမခံရခြင်းသဘောသက်ရောက်သလိုအချိန်မရွေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပျက်ပြားနိုင်ပြီးဘဝအာမခံမှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့်ကမ္ဘာရွာကြီးဟုဆိုသောဂလိုဘယ်လိုင်ဇေးရှင်း(IT)နည်းပညာတိုးတက်ထွန်းကား လာသောခေတ်တွင်နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်ဒီဒေသတွင်းရှင်သန်နေထိုင်သောမွန်ပြည်သူများလူနေမှုအဆင့်အတန်းကသုညသာသာနိမ့်ကျခဲ့သည်။ စီးပွားရေး/ကျန်းမာရေး/ပညာရေး/ဆက်သွယ်ရေး/အဘက်ဘက်မှနောက် ကောက်ကျန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဝင်းရော်ဒေသတွင်းရှိကလေးငယ်များနှင့်ကျောင်းနေရွယ်လူငယ်များမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့်အရွယ်မတိုင်မီပင်ကျောင်းပညာရေးကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အခန်းကဏ္ဍများတွင်လည်းပညာရည်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောကြောင့်အမြင်ကျယ်ခြင်းမရှိ၍ဝိသမလောဘသမားများ၏မူးယစ်သားကောင်များဖြစ်အသုံးတော်ခံများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးဝါး(ဒေသအခေါ်မြင်းဆေး)ဟုခေါ်သောမူးယစ်ဆေးပြားများဒေသအတွင်းပျံ့နှံ့မှုကကြောက်စရာကောင်းလှပါသည်။လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်အချင်းချင်းလက်တို့၍သုံးစွဲဖူးသူအများစုသာသိ၍ကျယ်ပြန့်စွာသုံးစွဲခြင်းမရှိသလိုသိလည်းမသိချေ။ ယခုအချိန်တွင်လူငယ်လူပျိုဖော်ဝင်စမှစ၍လူလတ်ပိုင်းသာမကလူ ကြီးပိုင်းတိုင်အောင်အလွှာမရွေးသုံးစွဲနေကြသည်မှာအလွန်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်မြင်နေရသည်။ ဤဆေးဝါးသုံးစွဲသည့်အကျင့်ဆိုးသည်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်(ထိုင်းနိုင်ငံ)ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဘဝမှမိမိနေရပ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ ပါလာသောအကျင့်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားကဈေးနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်ယခုဆိုလျှင်စိတ် ကြွဆေးပြားအစားဘိန်းစာရွက်ကိုပြုတ်၍ရသောအရည်ကိုသောက်၍မူးယစ်နေကြပြန်သည်။ထိုဒေသတွင်း လူငယ်များကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝခံယူချက်ဘာမှမရှိတော့ပါ။နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်သို့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာလုပ်ကိုင်၍ရလာသောချွေးနှဲစာငွေကိုစိတ်ဆန္ဒနောက်လိုက်၍သုံးဖြုန်းကြကုန်၏။ ...
1...1415161717 ၏စာမျက်နှာ 15